AC Hotels by Marriott dia manokatra hotely voalohany ao Jamaika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » AC Hotels by Marriott dia manokatra hotely voalohany ao Jamaika
AC Hotels by Marriott dia nanambara ny fisokafan'ny AC Hotel Kingston, Jamaica, izay nitondra ny endrika famolavolana ny eritreritra ho an'ny nosy. Teraka tamin'ny fahitana sonia an'ny hotely fanta-daza Antonio Catalan, ny marika dia natsangana tamin'ny taona 1998 tany Espana, ary niditra tao amin'ny portfolio an'ny Marriott International tamin'ny 2011, nandefa ny AC Hotels avy amin'i Marriott manerantany amin'ny toerana misy an'i Frantsa, Danemark, Etazonia, Amerika Latina, Puerto Rico ary i Jamaika ankehitriny.
"Faly izahay mandray ny hotely AC anay voalohany any Jamaika, izay manolotra serivisy manara-penitra sy manara-penitra ho an'ny mpandeha ary koa manararaotra miadana sy mamoaka ny hatsarana amin'ny zava-dehibe rehefa mitsidika ny toerana haleha," hoy i Toni Stoeckl, filoha lefitra, Marika voafantina manokana ho an'ny Marriott International, ary ny Global Brand Leader, AC Hotels avy amin'i Marriott.
Ity fanampiana vaovao eto an-tanàna ity dia heverina fa hisy vokany tsara amin'ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena. Tao anatin'ny fitsangatsanganana iray farany tao amin'ny hotely, ny minisitry ny fizahan-tany ho an'i Jamaika, Edmund Bartlett dia nilaza fa, "Ny voalohan'ny marika toy ny AC Hotels any Kingston dia hanamafy ny toeran'ny tanàna ho toerana fizahan-tany matanjaka ao an-tanàna."
Ny AC Hotel Kingston Jamaica dia nanisy fikitihana maoderina tsy ny any an-danitra Kingston ihany fa hatrany amin'ny faritra Karaiba midadasika, manatevin-daharana ny AC Hotel avy amin'i Marriott San Juan Condado ho hotely faharoa an'ny marika ao amin'io faritra io.
Manomboka voalohany any Çeşme, Torkia ny Marriott's The Luxury Collection
Benchmark dia manendry talen'ny Catering & Convention Services, Santa Barbara Beach & Golf Resort, Curaçao